IRashiya iyalela 'iveki engasebenziyo' yesizwe njengoko ukufa kwe-COVID-19 kunyuka
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo » IRashiya iyalela 'iveki engasebenziyo' yesizwe njengoko ukufa kwe-COVID-19 kunyuka
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Xanduva • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Oktobha 20, 2021
IRashiya iyalela 'iveki engasebenziyo' yesizwe njengoko ukufa kwe-COVID-19 kunyuka.
Amanani okusweleka e-COVID-19 eRashiya mihla le aye anyuka kangangeeveki kwaye abeka i-1,000 okokuqala ngeempelaveki phakathi kwamanqanaba okugonya amdaka, ukuyekelela kwezimvo zoluntu malunga nokuthatha amanyathelo okhuseleko kunye nokungafuni kukarhulumente ukuthintela izithintelo.
I-Russia ixele ukubhubha kwe-COVID-1,028 kwiiyure ezingama-24, elona nani liphezulu ukusukela oko kwaqala ubhubhane.
Elona nani likhulu labantu abafayo kwanikelwa ingxelo ngalo kwizixeko ezibini ezinkulu zelo lizwe, iMoscow neSt.
Kwakukho ukonyuka okukhawulezileyo kwinani leemvavanyo ezichanekileyo zentsholongwane, nabantu abangama-34,073 baqinisekiswa ukuba bosulelekile kwangelo xesha linye.
Abasebenzi baseRussia bayalelwa ukuba bangabikho emsebenzini iveki eqala kamva kulenyanga phakathi kwenani elonyukayo losulelo olutsha lwe-COVID-19 kunye nokufa.
Umongameli waseRussia u-Vladimir Putin wamkele izicwangciso zikarhulumente zokuyalela abasebenzi kwilizwe liphela iveki ukuba bahambe, ngeenjongo zokumisa i-spike ebukhali kwinani lokufa kwe-coronavirus.
Igosa likarhulumente waseRussia ngoLwesithathu linike ingxelo yokufa kwabantu abali-1,028 24 kwi-COVID ngexesha leeyure ezingama-XNUMX ezidlulileyo, elilelona nani liphezulu okoko kwaqala ubhubhane. Oko kuzise RhashiyaInani lokufa lilonke ukuya kuma-226,353, elilelona liphezulu kakhulu eYurophu.
Kwintlanganiso yamagosa karhulumente ngoLwesithathu, uPutin unike imvume yokuya phambili kumalungiselelo okwandisa iholide yesizwe ecwangcisiweyo yeentsuku ezimbini kunye nokugcina abasebenzi abaninzi ekhaya, behlawulwa, iveki epheleleyo.
Ngaphantsi kwezicwangciso, iiofisi ziya kuvalwa kwilizwe lonke phakathi kwe-30 ka-Okthobha kunye ne-7 kaNovemba, kodwa uPutin wongezelela ukuba kwezinye iindawo apho imeko iyingozi kakhulu, ixesha elingasebenziyo lingaqala kwangoko ngoMgqibelo kwaye landiswe emva kwe-7 kaNovemba.
Ngokutsho kukaPutin, ngoku kubalulekile ukuba Rhashiya "Owona msebenzi wethu ngoku kukukhusela ubomi babemi kwaye, kangangoko sinakho, ukunciphisa ukusasazeka kosulelo lwe-COVID-19."
Esi sicwangciso sikwacebisa ukuba kutshintshelwe bonke abasebenzi abangagonywanga abangaphezulu kweminyaka engama-60 kwilungiselelo lokusebenza kude kwinyanga ezayo, kwaye kunikezelwe abasebenzi iintsuku ezimbini ezahlukeneyo zokuya kugonyelwa i-COVID-19.
RhashiyaAmanani okusweleka kwe-COVID-19 yemihla ngemihla sele enyuka kangangeeveki kwaye abeke i-1,000 okokuqala ngeempelaveki phakathi kwamanqanaba okugonya amdaka, ukuyekelela izimvo zoluntu malunga nokuthatha amanyathelo okhuseleko kunye nokungafuni kukarhulumente ukuthintela izithintelo.
Malunga ne-45 yezigidi zaseRussia, okanye iipesenti ezingama-32 zabantu abaphantse babe zizigidi ezili-146, bagonyiwe ngokupheleleyo.
Kweminye imimandla, usulelo olwandayo lunyanzelise abasemagunyeni ukuba banqumamise uncedo lwezonyango kubemi njengoko amaziko okhathalelo lwempilo ayenyanzelwa ukuba agxile ekunyangeni abaguli be-coronavirus.
In eMoscow, nangona kunjalo, ubomi buqhubekile njengesiqhelo, iivenkile zokutyela neeholo zemiboniso bhanyabhanya zigcwele ngabantu, izihlwele zigcwele iiklabhu zasebusuku kunye nebar karaoke kunye nabakhweli abatyeshela ngokubanzi igunya lemaski kwezothutho lukawonkewonke, nanjengoko iiyunithi zononophelo olunamandla zizalise iiveki ezidlulileyo.
Kwangoko ngoLwesithathu, amagosa aseRussia abhengeze ukuba eli lizwe libhale elona nani liphezulu lokusweleka okunxulumene ne-coronavirus ukusukela oko kwaqala ubhubhane kunyaka ophelileyo kwaye kwaxelwa elona nani likhulu lababhubhileyo kwizixeko ezibini ezikhulu. eMoscow naseSt. Petersburg.